Social Media Inodzivirirwa Pasi Pekutaura Mahara uye Yemahara Press? | Martech Zone
Social Media Inodzivirirwa Pasi Pekutaura Mahara uye Yemahara Press?
NeChishanu, Gunyana 13, 2013 NeChishanu, Gunyana 13, 2013 Douglas Karr
Ichi chingave chimwe chezviitiko zvinotyisa kwazvo izvo zvinotyisidzira kutaura kwemahara uye nehurukuro yemahara munyika ino. Seneti yakapasa a midhiya nhoo mutemo izvo zvakatsanangurwa utapi venhau uye uko iko chete kwakachengetedzwa kirasi yemutapi venhau vari avo vanobatanidzwa mukati zviri pamutemo nhau-kuunganidza zviitiko.
Kubva pakuona kwetsoka zviuru gumi, bhiri rinoratidzika kunge zano rakakura. The LA Times inotodaidza kuti "Bhiri rekuchengetedza vatori venhau". Dambudziko ndere mutauro wepasi pasi unobvumidza hurumende kutsanangura kuti a munyori wenhau ndiani, ndiani a munyori wenhau iri, kana chii zviri pamutemo nhau-kuunganidza ndiro.
Heino kutora kwangu. Citizen venhau irikushandisa kumanikidzwa kusingakundike kuhurumende yedu iri kufumura tani yezvinhu. Ehezve kune bi-partisan rutsigiro kutsanangura patsva uye kumanikidza chiyero chekuti ndiani kana chii chinonzi utapi venhau. Chero ani anotyisidzira kufumura matambudziko ehurumende anogona kurasikirwa nekudzivirirwa kwavo kwemapepanhau pasi peBumbiro redu. Vese vezvematongerwo enyika vangade izvozvo… zvinoreva kuti vanokwanisa kushandisa mauto kutyisidzira nekutyisidzira avo vavasingabvumirane navo.
Kunyangwe iwe uchibvumirana nazvo Edward Snowden kana kwete, ruzivo rwaakaburitsa rwakazivisa veruzhinji uye rwakakonzera kutsamwa kwezvirongwa uko NSA yaisora ​​kwatiri. Iri bhiri harinei nemitemo yezvakaitwa naWellden. Zvinotyisa, zvinogona kukanganisa kana mutapi wenhau akaiburitsa zviri pamutemo, zvakadaro, dai anga ari mugari weAmerica. Yakanga ichiburitsa dzakarongedzwa zvinhu zviri pamutemo nhau-kuunganidza?
Pakati pa1972 na1976, Bob Woodward naCarl Bernstein vakabuda sevamwe vevatori venhau vane mukurumbira muAmerica uye vakazozivikanwa nekusingaperi sevatori venhau vakapwanya Watergate, iyo nyaya hombe mune zvematongerwo enyika eAmerica. Ruzhinji rweruzivo rwavakapihwa rwakazadzikiswa kuburikidza nemuziviriri mukati meWhite House. Zvaive izvo here zviri pamutemo nhau-kuunganidza?
Zvichida maRepublicans musimba anogona kutaura kuti MSNBC haisi yepamutemo. Zvichida maDemocrat musimba anogona kutaura kuti Fox News haisi pamutemo. Ko kana mumwe mutori wenhau akafumura hofori huru yehurumende kuburikidza zvakaderera pane zviri pamutemo nhau-kuunganidza? Anogona kukandwa mutirongo uye kunyadzisa kwakavigwa? Aya anongova matambudziko mukati mechinyakare midhiya. Zvinowedzera kuwedzera kana iwe uchifunga nezveInternet uye kana kunyora chinyorwa paWiki kuchidzivirirwa (unogona kusarongerwa blogger kana mutori wenhau).
Ko zvakadii paunotanga Facebook peji kupikisa kana kutsigira musoro wenyaya. Iwe unoshandisa tani yenguva yekumisikidza ruzivo iyo internet, uchiigovana pane yako Facebook peji, kukura vateereri uye kuvaka nharaunda. Iwe uri mutori wenhau here? Peji rako reFacebook rakachengetedzwa here? Wakaunganidza here ruzivo iwe rwawakagovana zviri pamutemo? Kana ... unogona kumhan'arwa nevanopikisa, nharaunda yakavharwa, uye kutovharirwa nekuti hauna kuchengetedzwa pasi peHurumende. tsananguro.
Nemagariro enhau uye nedhijitari webhu, anenge munhu wese ari kutora chikamu ari kuunganidza nekugovana nhau. Tose tinofanira kuchengetedzwa.
Kudzoka pakanyorwa Bumbiro, chero munhu wepakati mumugwagwa aigona kukwereta kana kutenga muchina wekudhinda waive munyori wenhau. Kana iwe ukadzokera kumashure uye wobva wadzokorora mamwe emamwe mapepa mapepa aive akadhindwa kareko, vaive nehutsinye. Vanyori vezvematongerwo enyika vakazorwa nenhema dzekunyepa kuti vadzire zvisirizvo kuvanhu kuti vavigire zvido zvavo zvematongerwo enyika. Kuva mutapi wenhau kwaisada dhigirii ... hauna kana kuperetera kana kushandisa girama chaiyo! Uye masangano enhau haana kuoneka kusvika makumi emakore gare gare sezvo mapepanhau akatanga kutenga iwo madiki madiki. Izvi zvakatungamira kune venhau venhau moguls vatinavo nhasi.
Vanyori venhau vekutanga vaive vagari vemo vachiburitsa izwi. Paive zero chokwadi kuna avo vavakananga, kuti vakawana sei ruzivo, kana kwavakarutsikisa. Uye zvakadaro… vatungamiriri vedu venyika yedu… avo vaiwanzonangana nekurwiswa uku… vakasarudza kuchengetedza kodzero dzekutaura nekusununguka kwenhau. Vakasarudza, nechinangwa, kwete kutsanangura kuti mutepfenyuro waive chii, nhau dzakaunganidzwa sei, kana naani.
Ini ndinobvumirana zvachose Matt Drudge pane izvi, ndiani Drudge Chirevo pamwe zvaisazodzivirirwa pasi pemutemo uyu. Iri ibhiri rinotyisa rinogumira pane fascism, kana isiri kuvhura musuwo waro.
Tags: kusununguka kutaurajournalismzviri pamutemo nhau-kuunganidzaSenate
Bislr: Akangwara Kushambadzira OS
Doug - ingori misoro mudenga, ini ndaive nechinetso kushandisa yangu buffer yekuwedzera (yanga isingawani URL) uye ndaisakwanisa kushandisa Google+ pane yako share bar nekuti yaive "pasi" peji uye ini handina kukwanisa kupururudza . Kupenga kuve kunonakidza.
Kutenda nekugovana .. ini ndaive nekuverenga kukuru ..